U-Edgar Allan Poe wayeyingqondi ehlaselwa kukudakumba. | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | I-Biography, Ababhali, iintlobo, Inoveli emnyama, Imibongo, Amabali
Edgar allan Poe: ilizwi loxinzelelo.
U-Edgar Allan Poe wazalelwa eBoston ngoJanuwari 19, 1809, Wafa kuphela kwiminyaka engama-40 kamva eBaltimore ngo-Okthobha 7. Ukuba ucinga ngako kancinci, kubonakala ngathi inkosi yoyikiso kunye namabali amafutshane ayekhethe inyanga ngokobomi bakhe.
Umbhali odumileyo waseMelika wasweleka engqongwe yi-aura yemfihlakaloZombini izizathu zokufa kwakhe kunye nengcaciso yamazwi akhe okugqibela zihlala ziyimfihlo. Isimo sokumka kwakhe siqhelekile kumgangatho ongwevu weenoveli zakhe zolwaphulo-mthetho.
1 Incinci yenu imbali
1.1 Umfana oshiywe ngutata wakhe kunye nomama wakhe ongasekhoyo
1.2 Ukwamkela umntwana ongamzalanga abe ngowakho kunye nobundlobongela basekhaya
1.3 Ukuhlala kwakho eScotland naseNgilani
1.4 Poe kunye nokufa
1.5 Umfana othuleyo
1.6 Umtshato owalelweyo kunye nokufa okungalindelekanga
1.7 Ukusilela ukuzibulala nokuzama ukufa ngendlela engaqhelekanga
2 Poe kunye noxinzelelo
Incinci yenu imbali
Umfana oshiywe ngutata wakhe kunye nomama wakhe ongasekhoyo
UPoe wayengowesibini kubantakwabo abathathu abashiywa ngoyise, kwaye baphela sele beziinkedama xa umama wabo wasweleka emva konyaka. Umkhuluwa wayehlala notatomkhulu notatomkhulu wakhe, ke yena wahlala phantsi kweliso labo.
Ukwamkela umntwana ongamzalanga abe ngowakho kunye nobundlobongela basekhaya
Ngakolunye uhlangothi, Poe kunye nodadewabo omncinci banikezelwa ukuba bamkelwe. Bobabini bamkelwe ziintsapho ezinonophelo. U-Edgar wahlala apho wathabatha igama lakhe lokugqibela losapho, u-Allan, nangona engazange amkelwe ngokusemthethweni.
Poe wayesele evela kumava abuhlungu, kwaye Nangona umama wakhe owayemkhulisa wayemthanda kakhulu, utata wakhe wesibini wayengumntu onogonyamelo nonobundlongondlongo. Oku kukhokelele kunina, ukuze amkhathalele, amkhusele ngokugqithisileyo ukuthintela utata wakhe ukuba angamhlaseli.
Ukuhlala kwakho eScotland naseNgilani
Ngexesha lokukhula kwakhe umbhali wayehlala eScotland naseNgilani, kwaye ezi ndawo zaphawula ngendlela enkulu ngenkcubeko yazo, intsomi kunye nolwakhiwo. Phakathi kweeleta ezazivela kuloo minyaka kunokubonwa ukuba umama wesibini kaPoe, uFrances, wayedandathekile kwaye umbhali wayehamba naye esentlungwini.
Poe kunye nokufa
Ukufa kwakubonakala kuye. Xa wayeneminyaka eli-14 waqala ukuthandana nomama afunda naye, wanikezela kuye umbongo "KuHelen", kungekudala emva kokubhubha komama oselula.
Wayengumntwana okwishumi elivisayo othuleyo enobunzima ekunxibelelaneni nehlabathi langaphandle., owayenesimo esomeleleyo nesingazange sikuxhase ukuphathwa kakubi okanye ubukrwada bomlomo.
Umtshato owalelweyo kunye nokufa okungalindelekanga
Ekukhuleni kwakhe waba yindoda yokuzingxala ngokulinganayo, egcwele amaphupha amabi awayemkhathaza de kuye esiphelweni. Watshata nomzala wakhe oneminyaka eli-13 ubudala uVirgina Clemm ngo-1835. Kwiminyaka esi-8 kamva eli bhinqa liselula laqala ukubonisa iimpawu ezicacileyo zento eyaziwa ngokuba sisifo sephepha.
U-Edgar waqala ukusela kunye nokusebenzisa i-laudanum (ekholelwa), ngenxa yomxholo we-opium, ukulawula iintlungu. Kuyacaca ukuba ngeli xesha uPoe wawela kuxinzelelo olunzulu awayengazukuvela kulo. UVirginia wasweleka ngo-1947 ngenxa yesifo sephepha.
Ukusilela ukuzibulala nokuzama ukufa ngendlela engaqhelekanga
Kunyaka kamva uPoe wazama ukuzibulala nge-laudanum, kodwa wasilela. Wabuyela eBaltimore waza waqalisa ubudlelwane nentombi endala. Kwathiwa ujongeka onwabile kwaye umhla womtshato wabekwa ngo-Okthobha 17, 1949.
Isicatshulwa sikaEdgar Allan Poe.
Ngaphandle kokuzibandakanya, uPoe wanyamalala de kwango-Okthobha u-3, xa wafunyanwa ekwimeko embi, e-delirious. Kwiintsuku ezi-4 kamva Poe uxelisile kwihlabathi ngelixa ebiza uReynolds othile kwaye ivaliwe ngomphefumlo wokugqibela "UThixo uncede umphefumlo wam ohluphekileyo!". Ngelishwa, kwaye njengakwiimeko ezininzi, Kwakusemva kokufa kwakhe awathi waqatshelwa.
Poe kunye noxinzelelo
Ibali lakhe libali eliphilayo loxinzelelo, amabali akhe azaliswe kukufa abonisa ngokucacileyo ilahleko yakhe.. Umbhali akazange afumane uncedo, kuba ngelo xesha kwakungenakwenzeka, ngoko ubomi bakhe babusoloko buhamba kumda phakathi kwengqondo kunye nokugula kwengqondo.
Ngamazwi akhe, igwababa kumbongo wakhe lisekwe kwintaka ethethayo nguDickens, kodwa intuthumbo yakhe, iintsiba ezimnyama, kunye nokubhabha kabuhlungu kwentaka kubonakala ngathi kuhambelana nenkcazo yoxinzelelo. "I-Tell-Tale Heart" kunye "neKati eliMnyama" yimiboniso ecacileyo yendlela abaphatha kakubi ngayo abantu xa benetyala kwaye babaqhathe. Isityholo ngulo dade umbi woxinzelelo, osoloko esiza ebambe isandla sakhe kwaye afake indlebe yakhe nabani na.
U-Edgar Allan Poe wayethuthunjiswa kangangokuba wasweleka ngenxa yokuba wayengakwazi ukubhala ipeni yakhe. Uxinzelelo lwamgxotha ngaphambi kwexesha lokufikisa kwaye akazange ayeke ukuvela kwindlela yakhe, kumabali akhe nakwimibhalo. Kanye njengokuba uGarrick wazalisa umhlaba wemibongo ngokuhleka nangona wayenomngxuma entliziyweni yakhe, uPoe wazalisa uncwadi loloyiko ngenxa yomngxunya wakhe entliziyweni yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Edgar Allan Poe, ilizwi loxinzelelo
Ubomi nomsebenzi kaJuan Rulfo